Guddoomiye Mursal oo Xildhibaanadda xukuumadda ka tirsan ka dalbaday in ay golaha xaadiraan | Somsoon
Home WARAR Guddoomiye Mursal oo Xildhibaanadda xukuumadda ka tirsan ka dalbaday in ay golaha...
Guddoomiye Mursal oo Xildhibaanadda xukuumadda ka tirsan ka dalbaday in ay golaha xaadiraan
Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkaan ay shaqadii ugu badneyd u taallo Xildhibaanada Golaha Shacabka, isla markaana looga baahanyahay dhammaan Xildhibaanada in ay soo xaadiraan kulamada golaha.
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in ay jiraan Xildhibaano badan oo ka maqnaa kulankii maanta iyo kulamadii hore ee golaha, balse wixii hadda ka dambeeya aan la ogolaa doonin wax maqnaasho ah maadaama ay golaha shaqo badan hor taalo sida uu sheegay guddoomiyuhu.
Xildhibaanada baarlamaanka kuwooda ka tirsan golaha wasiiradda xukuumadda federaalka ayuu si gaar ah uga dalbaday in si joogto ah u soo xaadiraan kulamada xildhibaanada golaha shacabka.
Gudoomiyaha ayaa xusay in tirada Xildhibaanada Wasiirada ah ay aad u badan yihiin, islamarkaana laga doonayo in ay ka qeyb galaan kulamada baarlamaanka hadii aysan jirin shaqooyin muhiim ah.
Hadalkaan ayuu ka jeediyay guddoomiye Maxamed Mursal kulankii maanta ee golaha shacabka oo lagu qabtay markii ugu horeysay xarunta Villa Hargeysa, taas oo loo wareejiyay kulamadii golaha shacabka, waxaana maanta gabi ahaanba laga mamnuucay kulamada golaha shacabka weriyaashii wararka uga soo tabin jiray warbaahinta madaxa banaan.
Article horeSomali military kills 20 militants in an ambush
Article socoda Xeer-Ilaaliyaha Guud ee Puntland oo ka hadlay xariga Weriye ku xiran Garowe